Blaogy.com sa Blaogy.org? Malalaka ny safidy | Hery - Tsiky dia ampy
milay be fa misaotra eeeeeeeeee :)
sady tena mora ampiasaina be no milay be doly le endrika.
- misy fanovana css v ?
- misy an'le fasiana teny miafina ?
- misy diso kely @ le endrika hoe "very plain text", nandramako fotsiny d tonga d nicoince nedala :'(
Nampidirin'i simplex @ 17:31, 2007-01-23 [Valio]
Mankasitraka hatrany ny fikarakarana e...
Fa zao, afaka atao mitovy ve ny anarana hoe samy "kitjo" ohatra?
andraso mihitsy aloha andramana jerena e
Misaotra Hery an!
Nampidirin'i kitjo @ 17:31, 2007-01-23 [Valio]
lasa tsy mande kou le "tiga". Mety tsy any ny tena olana fa vao nifidy 1 fotsiny za tonga d tsy nety le izy.
Za mintsy v no tena alakaosy sa ahoana e? ze alehako rehetra otran'ny tsy poinsa doly... :'(
Nampidirin'i simplex @ 20:26, 2007-01-23 [Valio]
Oh my gosh u're amazing!!! I absolutely love the designs!!!! :-)
Nampidirin'i Mirana @ 05:46, 2007-01-24 [Valio]
Raha ny fahafantarako azy dia ny serasera izany izao no mampiantrano blaogy malagasy betsaka indrindra. Eo amin'ilay fampahafantarana ny blaogy no iriko hotsipihina satria tokony handray an-tànana ny ampahany betsaka amin'io kosa ny serasera. Tsy ny fampahafantarana fe fampahafantarana fotsiny fa hatramin'ny fizarana googlejuice mihitsy. Tsy tsara hohararaotina indrindra ve ohatra ny fananana ny takelaka.org mba hampahafantarana amin'ny mpitsidika ireo blaogy malagasy rehetra, na ny mampiasa blaogy.org|com na ny manana ny blaoginy manokana ivelan'ny serasera?
Torohevitra iray aroso koa ohatra ny fametrahana rubrique "blaogy du jour" ao amin'ny serasera.org, mba hananan'ny blaogy malagasy sehatra ho hita bebe kokoa. Izany hoe isan'andro dia misy blaogy iray ao @ blaogy.com na blaogy.org alaina antsapaka ary aseho ny mombamomba azy.
Nampidirin'i DotMG @ 05:56, 2007-01-24 [Valio]
Valiny : :-)
- Tsisy fisaorana e. Tokony iaraha-manao hoa io.
- Misy endrika tsy mamely (Tsy miady amin'ny piesin'ny blaogy.org) dia esoriko tsikelikely. Ilay "whatever" dia an'ilay bandy tato ampiasana fa adino tao :-). Ilay Tiga dia misy erreur na dia efa nahitsy aza fa raha azoko ahitsy dia ahitsy. Ilay Very plain text nesoriko fa tsy dia tsara akory kanefa voatery hacker-na
- Ny fanovana CSS dia plugin vao hamboarina fa efa tao antsaina.
- Misy an'ilay lahatsoratra misy tenimiafina io :-) Jereo ery ankavanana rehefa hampiditra lahatsoratra.
- Efa nandramanao angamba fa afaka sady manana kitjo.blaogy.com no manana kitjo.blaogy.org
- I do love them too :-). I've fixed the error in the theme you chose.
- Misaotra be dia be amin'ny sosokevitra. Efa atao tokoa ny ezaka fa tena mbola tsy ampy, ny olana dia ny tsy fahampian'ny fotoana hanaovana azy rehetra. Hiezaka hatrany e.
Nampidirin'i Hery @ 10:00, 2007-01-24 [Valio]
mankahery hatrany ry Hery ah!
Za moa d tsy mahalala ze resaka ara-teknika any fa ny mampiasa fts no haiko..le tena very basic..hihhihi
Nampidirin'i kitjo @ 14:04, 2007-01-24 [Valio]
ny hany azo lazaina dia ny mankasitraka hery a.
Nampidirin'i dailynews @ 14:14, 2007-01-24 [Valio]
Fa i Mirana angaha dia tsy mahay miteny gasy mihitsy e. Ny olona rehetra mba efa miteny gasy ihany. Ary fantatro ianao fa mahay miteny gasy ihany koa.
Nampidirin'i miangaly @ 14:17, 2007-01-24 [Valio]
Mba manontany tena aho hoe firy @ ireto blaogista ireto re no tsy mahay "teny sinoa" toa ahy, fa dia mijery florà ikalamako mamaky ny hevitrareo. Tsy izay ve ry Hery ilay vao nolazaiko hoe ity .com aza mbola ilana vonjy isa-minitra, ianareo efa any @ .org indray, fa dia mahereza sy mahavità be re rey olona : mandihiza rahitsikitsika, hoy ny hira, hianaranay raha fararano. Ny soa fianatsa tokoa mahavokatsa ! Fa dia hovangivangianay matetika eo fotsiny aloha ity vaovao mandra-pi-capter-nay azy indray. Rehefa ho membre indray izahay, ianareo irariana efa tafita lafin-drano hafa indray. Misaotra mandrisika anay miadana hiala @ habadoana...
Nampidirin'i ikalamako @ 14:38, 2007-01-24 [Valio]
Mankasitraka Hery fa tena mafinaritra.
Efa misy manana ve ilay nom de domaine any Malagasy Miray ao amin'ny Blaogy.org toa ao amin'ny wordpress?
Satria ilay fanoratana anarana ho an'ny ilay blaogy dia tsy maintsy avy eo any serasera e? Nefa efa misy manana ilay anarana. :)
Nampidirin'i Tattum @ 16:10, 2007-01-24 [Valio]
Misaotra an'i Hery nampahafantatra. Dia handray anjara tokoa ny tenako.
Nampidirin'i soanja @ 17:58, 2007-01-24 [Valio]
Voalohany aloha de msôtra ny mpandrindra e :)
ikalamako : za koa de tena ôtranao : ny ahy indray de tsy hitako izay hapetraka ao @ blaogy.com isan'andro ka de hisy an'ity blaogy.org ity indray. hihihi Za angamba aloha de hisoratra anarana fotsiny fa mbola tsy hahita hatokona. :) Nefa asa aloha e : iza no mahalala raha hahita zavatra hotenenina ihany raTokinao ao ;) . Ny azo antoka de hihena indray zany ny "vie privée" de ampitomboina ny blabla sa aôna!! (hanihany) hihihi
Nampidirin'i Tokinao @ 20:30, 2007-01-24 [Valio]
Manahoana i Miangaly! Mahay teny gasy i Mirana :-) Azafady raha nanafotohina anao ny fitenenako teny angilisy teto. Miala tsiny indrindra !
Nampidirin'i Mirana @ 05:26, 2007-01-25 [Valio]
mba manandrna ato raha tafiditra e,
Nampidirin'i mihah @ 10:47, 2007-01-25 [Valio]
de mbola manandrana ihany ko @ ity indray
Nampidirin'i mihah @ 10:51, 2007-01-25 [Valio]
Misaotra Hery fa mety tsara kay le izy ,izany hoe mandeha tsara e,no mora ampiasaina ihany koa
Nampidirin'i mihah @ 10:56, 2007-01-25 [Valio]
Tokinao> oh reko misy alarme maneno izany nony niteny ianao ilay hoe "mihena ny vie privEe"..hahaha
Nampidirin'i kitjo @ 04:25, 2007-01-30 [Valio]
Nanandrana nanokatra aho
fa saika mba ataoko anarana hafa ilay izy fa tonga dia lasa kitjo...
sa mila mamorona anarana hafa ao @ serasera?
Nampidirin'i kitjo @ 17:11, 2007-01-31 [Valio]